ကိုကင်းငတ်မွတ်မှုသည်ကိုကင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများကို electrophysiological ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည် (၂၀၀၈) - Your Brain On Porn
စှဲလမျးသူ Biol ။ 2008 စက်တင်ဘာ; 13 (3-4): 386-92 ။ Doi: 10.1111 / j.1369-1600.2008.00100.x ။ EPub 2008 မတ်လ7။
Franken ih1, Dietvorst RC, Hesselmans M က, Franzek EJ, ဗန်က de Wetering BJ, ဗန် Strien JW.
အများအပြားကလေ့လာမှုများပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတိုးမြှင်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းပြသပါ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဖြစ်ရပ်-related ဦးနှောက်အလားအလာ (ERPs) ကို အသုံးပြု. ကင်း-မှီခိုလူနာအတွက်တဏှာအဆင့်ဆင့်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုရွေးချယ်အပြောင်းအလဲနဲ့အကြားအသင်းအဖွဲ့ဆနျးစစျဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ abstinent ကင်း-မှီခိုလူနာများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအုပ်စု, ငါတို့နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာ (LPP) ကြားနေနှင့်ကိုကင်း-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်း amplitudes လေ့လာခဲ့သည်။ ရလဒ်ကင်း-မှီခိုလူနာသည်ဤလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတိုးမြှင်အပြောင်းအလဲနဲ့အကြံပြုခြင်း, ထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကကိုကင်း-related လှုံ့ဆော်မှုမှနှောင်းပိုင်း LPP အချိန်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုတိုးမြှင် electrophysiological တုံ့ပြန်မှုများကဖော်ပြသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့တစ်ဦးခိုင်မာတဲ့အသင်းအဖွဲ့ကိုကင်းတဏှာနှင့် LPP လွှဲခွင်အကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မြင့်မားသောတဏှာအဆင့်ဆင့်လက်ျာ hemisphere အတွက်ဗဟိုလျှပ်ကူးပစ္စည်းက်ဘ်ဆိုက်များမှာပိုမိုကြီးမား LPP amplitude နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်နှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိုးဆွအပြောင်းအလဲနဲ့ချိတ်ဆက်သီအိုရီနှင့်အညီ၌ရှိကြ၏။ ထို့အပွငျက ERPs ကင်း-မှီခိုလူနာအတွက်လှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အသုံးဝင်သောအညွှန်းကိန်းဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြနေသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် electrophysiological အစီအမံပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်လက်တွေ့ဆက်စပ်မှုရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။